जंगली च्याउ विष हुन सक्छ ! ०.०२ ग्राम च्याउले नै लिन्छ ज्यान | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य जंगली च्याउ विष हुन सक्छ ! ०.०२ ग्राम च्याउले नै लिन्छ ज्यान
२०७७, २३ बैशाख मंगलवार २२:४२
यो साता जंगलबाट ल्याएको विषालु च्याउ खाँदा अर्घाखाँचीमा एकै परिवारका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । परिवारकै अन्य दुई जना बिरामी भई उपचाररत छन् । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–६ खिल्जीका ३२ वर्षिया रामकला महतरा र उनकी छोरी ७ वर्षीया वीपासा महतराको मृत्यु भएको हो ।
विषालु च्याउ खाएर बिरामी भएका उनीहरुको बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ । जंगली च्याउ विषालु पनि हुन्छन् भन्ने धेरैलाई थाह छ । मानव शरीरका लागि च्याउ अति उत्तम पौष्टिक आहार हो तर त्यही च्याउलाई ननिचेर खाँदा विषको रूपमा परिणत हुने गर्दछ । वर्षात् शुरु भएसँगै विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
तै पनि मानिसहरु जंगल जान्छन्, च्याउ टिप्छन पकाएर खान्छन् । ती मध्ये केही पारखी वा भनौं खान हुने च्याउ चिन्नेहरुलाई केही हुँदैन । तर चिन्न नसक्नेहरु मृत्युको मुखमा पुग्छन् ।नेपालमा सय किशिमका च्याउ विषालु छन् । केही च्याउ त यति धेरै विषालु छन् कि शुन्य दशमलव शुन्य २ ग्राम मात्रै पेटमा पर्यो भने मान्छे केही बेरमै मर्छ । जंगलमा पाइने, रुखमा उम्रन, परालमा उम्रने, ढुंगामा उम्रने, गोबरमा उम्रने च्याउहरु पनि विषालु हुन सक्छन् । मानिसहरु आँखा चिम्लेर च्याउ खाइरहेका छन् ।
नेपालमा मानिसहरु च्याउको रङ, चिप्लोपना, उम्रेको स्थान, वास्ना, चाँदीको चम्चाले चलाएर छुट्टयाउने गर्छन् । यी प्रक्रिया परम्परागत हुन् । यीनमा कुनै वैज्ञानिकता छैन् । सामान्यतः १२ वटा परम्परागत प्रयोग गरेर खान हुने नहुने च्याउ छुट्टयाउने गरिएको छ ।
जंगलमा पाइनेमध्ये कुन च्याउ खान हुने र कुन नहुने ? यसमा खासै द्विविधा छैन । सामान्य हिसाबले पनि खान नहुने र हुने च्याउ पहिचान गर्न सकिन्छ ।
च्याउ अनेक प्रजातिका हुन्छन् । यसमध्येबाट पनि च्याउको प्रकृति, रंग, स्वाद र गुण हेरेर चार भागमा विभाजन गरिएको छ ।
गाउँघरतिर वर्षेनी जंगली च्याउ खाने गरिन्छ । आफूले विगतदेखि नै खाइरहेको च्याउ पहिचान गरेर खानु उपयुक्त हुन्छ । नचिनेको वा त्यसअघि नखाइएको च्याउ सेवन गर्नुहुँदैन ।
बुढापाकालाई त जंगली च्याउबारे धेरै ज्ञान पनि हुन्छ । उनीहरूले पहिचान गरेको र खाँदै आएको च्याउ खान सकिन्छ । यद्यपि यस किसिमको च्याउ पनि कुनैबेला विषालु बन्न सक्छ ।
अहिले बजारमा केही थरीका च्याउ पाइन्छ, जुन कृतिम ढंगले उत्पादन गरिएको हो । यस्तो च्याउ खान वर्षायाम कुरिरहनुपर्दैन, जुनसुकै सिजनमा पनि पाइन्छ ।
तर, कृतिम ढंगले उत्पादन गर्ने यी च्याउ कति खान योग्य हुन्छ ? यसबारे भने विचार गर्नुपर्छ । किनभने कृतिम ढंगले उत्पादन गर्ने च्याउलाई उमार्न, बढाउन, किरा लाग्न नदिन र भण्डारण गर्न विभिन्न औषधि एवं रसायनको प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । खानेकुरामा प्रयोग गरिने यस्ता हानिकारक तत्वले हाम्रो शरीरलाई सोझै असर पुर्‍याउने भय रहन्छ।
च्याउमा के पाइन्छ ?
च्याउ खानै नहुने कुरा चाहिँ होइन । यो स्वादिलो र पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । च्याउमा प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स, क्याल्सियम आदि तत्व पाइन्छ । च्याउमा बोसो नगन्य मात्रामा पाइन्छ, यसमा स्टार्च हुँदैन । त्यसैले यो खानयोग्य उत्पादनमै पर्छ ।
च्याउ के हो ?
यो एक प्रकारको वनस्पती हो । फूल नफुल्ने प्रजातिको । यो फन्जाइ वर्गमा पर्छ । च्याउ एक प्रकारको ढुसी हो ।
संसारमा तीन हजार ८ सय बढी प्रजातिको च्याउ पत्ता लागेका छन् । त्यसमध्ये एक हजार विषालु र दुई हजार खानयोग्य मानिन्छ । जबकि २ सय प्रजातिको च्याउ औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिन्छ ।एजेन्सी
Previous articleभारतबाट चोर बाटो हुँदै नेपाल छिरेका डेढ सय जनालाई नियन्त्रण
Next articleविश्वकै लामो पुल बागलुङमा, गिनिज बुकमा दर्ता तयारी